***ရိုဟင်ဂျာ*** | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ***ရိုဟင်ဂျာ***
Posted by maung khinmin on Jul 22, 2012 in Creative Writing, Poetry | 31 comments
ဘင်္ဂါလီ (သောက်) သရမ်းတွေကဖြင့်..
ရွာဖျက်ကာ မင်းတင်ရှို ့ခြင်းတွေကြောင့်
ဘေးကင်းရာ ရှောင်ရပေသမို ့..
အိုးပစ် လို ့…အိမ်ယာခွာ….၊
ရိုဟင်ဂျာ ဟာ….ဒို ့တိုင်းရင်ပါ သတဲ့
ပညာရယ် တစ်ကယ် ဖျင်းပုံ..
ကုလားဟာ မြန်မာ့အမျိုးလို ့…မဆိုရုံတစ်မယ်..
အိမ်ယာအခြေ မဲ့ရှာသူပေသမို ့..
ကမ ္ဘာကို ဟစ်တိုင်တတ်ပုံက
ဘဂါင်္လီ မျိုးမစစ် တွေက…
maung khinmin has written 85 post in this Website..
View all posts by maung khinmin →
ဟတ်ကို ထိတယ်ဗျာ တိုက်ရိုက်ပဲ
ဆယာလေး ( အော်စကာ ) အထီး says:
ဆရာ မောင်ခင်မင်း ခမျ
ဒီလိုချီးဘဒိန်း ကောင်တွေကို များများလေး ဆုံးမ သင့်ပါတယ်။
သူများနိုင်ငံ ခိုးဝင်ပြီး ဖျက်လို ့ဖျက်ဆီး လုပ်တတ်တဲ့ မျိုးယုတ်တွေကို များများလေး ဖဲ့ပေးပါ။
ရှိသမျှ ဒုက္ခ သည်စခန်း ၊ ရွာလုံးကျွတ်ပျော်ပွဲစားထွက်ကာလ
ရခွေးပြည်မှာအဆိုးဆုံး ပေပ ..။
..အခေါ်ခံမောင်ရခွေမှာ ဘုရား ပါထူးကာပ
အိမ်တိုင်းမှာ ဘင်္ဂလီ ကုလားကို စင်တင်ကာထားတယ်
yel kaung ကိုတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်…
အမှန်နဲ ့အမှား.. ကုလားနဲ ့ရခိုင်..ခင်ဗျားဉာဏ်နဲလို ့မမြင်မိတာလားးး
ဖြစ်မယ်လို ့ခန် ့မှန်းမိပါရဲ့….
နွားmaung khinmin, မင်းကကောမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုနားလည်သလဲ၊လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ဘာသာပေါင်းစုံ
ရခိုင်မှစပါးစိုက်တာ၊သီးနှံစိုက်တာ၊သားငါးဖမ်းတာ ရခွေးတစ်ကောင်မှမပါတာမို့ရခိုင်ပြည်ငတ်ဖို(၉၀)ရာခိုင်နှုန်းသေချာနေပြီ။ ရခိုင်ကကောင်တွေဟတ်ဖို့ပြင်
Thu Wai မင်းတို့ကုလားဘုရားက တိရိဆ္ဆန်တောင်ဖြစ်သေးတာမင်းသမိုင်းပြန်ကြည့်၊ကုလားဇတ်နိမ်သေချာ
jacky tun ဆိုတဲ့ငပေါ့လေးမင်းတို့ဘုရားရုပ်မင်းတို့မြင်ဖူးလို့လား၊အခုမင်းတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ရုပ်ကသူရုပ်
မမ ခွေးအညာသူ တို့ခွေးဘဲရှုပ် တို့ခွေးkaung kin pyarတို့မအေ -ိုးthree colorsတို့
သမိုင်းစဉ်ဆက်နေလာခဲ့တာကို မခုမှ မင်းတို့ပိုင်ဆိုရင် ဘာအထောက်အထားရှိလို့လဲ၊မင်းအမေခံနေတဲ့ပုံ
ရဲခေါင် (ခေါ် ) ခွေးကုလားဒိန် မျိုးမစစ်သို့………
ပထမဆုံးပြောချင်တာက မင်းတော်တော်မိုက်ရိုင်းတယ်။အသိညာဏ် မရှိတာပေါ်လွင်လွန်းတယ်။
(ရခိုင်မှစပါးစိုက်တာ၊သီးနှံစိုက်တာ၊သားငါးဖမ်းတာ ရခွေးတစ်ကောင်မှမပါတာမို့ရခိုင်ပြည်ငတ်ဖို(၉၀)ရာခိုင်နှုန်းသေချာနေပြီ။ )
အဲဒါဘာဆိုလိုတာလဲကွ။ဘင်္ဂလီမင်းပထွေးတွေကငတ်လို့ ရခိုင်ထဲလာ ကူလီလုပ်တာလေ။
ခွေးကုလား မင်းတို့မျိုးမစစ်ဘင်္ဂလီ နဲ့ သာကီဝင် မင်းမျိုးက နံ့သာဆီနဲ့ ဝက်ချီးကွမှတ်ထား။
အန္ဒိယမှာ မင်းတို့ပထွေး မျိုးမစစ်ဘင်္ဂလီနဲ့ ဇာတ်မြင့်တွေက သောက်ရေခွက်တောင်
အတူတူမသောက်တာ အခုထိဆိုတာကော မင်းချီးဦးဏှောက်လောက်နဲ့
သိမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ထပ်ပြောချင်တာက အရင်ကမြန်မာနိုင်ငံဟာ ကော့ဘဇား(ခေါ်)
စစ်တကောင်းဟာ ငါတို့ပိုင်နယ်မြေကွ ချီးကုလားရ။စာလဲ သေသေချာချာ တတ်မယ့်ကောင်
ဟုတ်ပုံမရပါဘူးကွာ။မင်းတို့ ဗလီဆရာတွေ မုသားပြော ဝါဒဖြန့်တာကို အဟုတ်ထင်မနေနဲ့။
တစ်နေ့ ၅ ခါသာ အေးအေးဖင်ဘူးတောင်းထောင်နေ အဲဒါကမှမင်းအတွက် အကျိုးရှိဦးမယ်။
မင်းကို ဝင်ပြောရတာ ငါ့လက်တောင်သနသကွာ။စိတ်ပိန်တယ်ဟေ့…..
ဝက်လိုအကောင် ….. ငရဲခေါင်
သို ့သော် …
ရိုဟင်ဂျာ ကုလား မပါ …
တိုင်းရင်းသား မဟုတ် …ကုလား ယုတ်
အဟုတ် သေချာ မှတ် ….။
ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာ…ကိုယ့်ထီး .. ကိုယ်နန်း …ကိုယ့်ကြဌာန်း နှင့် …
မြန်မာ နိုင်ငံတွင်းမှ … ထေရ်ရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ …တိုင်းရင်းသွေးစစ်စစ်များဖြစ်
ကြတယ်ဆိုတာ … စာတတ်ရင် သိနိုင်၏ ..။။
ဝက်လိုအကောင် … ငရဲခေါင်
သမိုင်းမျိုးရိုး … သခင်မျိုး
ကျောရိုးနောက်ခံ … သမိုင်းမှန်
ဘယ်လို ပြောမလဲ… ထုတ်ပြသေချာ
မျိုးရိုးဇာတိ … မှတ်မိ ပါစ
သဘောက် ဘဝကို …
သူခိုးလူဟစ် .. သဘောက် မြစ်တွေ
အိမ်ခြေ ယာမဲ ့… သနားဖွယ့်ပင်
ဆင် ခြင် လေရော့ … ဒို ့တော့ မေတ္တာ
ပို ့သပါရဲ့ … တရားမဲ့စွာ
ကျင့်ကြံ ပါဘူး … ဝက်အရူးရဲ့
အဲလောက်ထိလဲ … ကြောက်နဲ့မောင် ။။။
ငါလိုးမသားချီးစားမိုးတိမ် သူတောင်းစားမျိုးရိုးကျွန်မျိုးရိုး၊ဖါသည်မမျိုးရိုးကအဖေမပေါ်ဘဲမွေးလာတဲ့ချီးစားမိုးတိမ်နဲ့ချီးစားမောင်ခင်မင်း မင်းတို့ထက်ဥဏ်ရှိတဲ့အကောင်တွေကွ၊ဒါကြောင်းကုလားရှိခိုးနေရတဲ့
မင်အမေလင် ဘုန်းကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးမယာတွေ ဝတ်နေတာ ကုလားတွေရဲ့ဇာရီနဲ့ဒိုတီတွေဘဲ
ကုလားအဝတ်ဝတ်ထားတာမြင်တာနဲ့ရှိခိုးနေရတာ၊မင်းတို့အမျိုးတွေကွ၊ငါလိုးမသားရဲ့၊ငါတို့ကဇတ်မြင့်တွေကြောင့် လူကိုရှိမခိုးဘူး၊ ၊လူကိုမကိုးကွယ်ဘူး ၊ ဗုဒ္ဓက ခွေးမျိုးကလည်းဖြစ်တယ်၊လောက်မျိုးကလဲဖြစ်တယ်၊မျောက်မျိုးကလဲဖြစ်တယ်၊
မင်းအမေလင်ပြောခဲ့တာလား၊သူတောင်းစားဘဝမှာ ဖြစ်ခဲ့တာ မဖတ်ဘူးလား၊အိမ်သာကချေးတွင်ထဲမှတောင်နေခဲ့တာ မင်းမသိရင်ဘုန်းကြီးမေးကြည့်၊
မင်းကိုးကွယ်တဲ့ကုလားက ဇတ်နိမ့်လားဇတ်မြင့်လားသိချင်ရင်၊ သချင်္ိုင်းကုန်းမှာသေတဲ့အသား
တောင်စားတာကွ၊ အသေကောင်အပုတ်ကအစပံ့သကုူဆိုြ့ပီး စားတယ်၊
မင်းတို့အခုကိုးကွယ်နေတာကော ဗုဒ္ဓဘာသာ(၂)မျိုးမြင့်မြတ်သူတွေကိုယ်ကွယ်တဲ့မဟာယာနတောင်မဟုတ်ဘူး၊သူတောင်စားတွေ ဖာမတွေ၊ဖါကောင်းတောင်တွေကိုးကွယ်တဲ့ဟိနယာန(ယခုထေရဝါဒလို့ သနပ်ခါးလိမ်းထားတာ)
ဇတ်နိမ့်သတောင်းစား၊ခွေးဝဲစားတွေကိုးကွယ် ဟိနယာန (ထေရဝါဒဘဲ) ၊အေး အိန္ဒိယ၊စစ်တကောင်း အားလုံး မင်ဒအမေခင်းရိုဟင်ဂှာဘင်္ဂလီ ဗုဒ္ဓရဲနယ်နမိတ်ဘဲ၊ဒါဆိုသဘောပေါက်သူတို့နယ်ထဲသူတို့ကြိ်ုက်သလို့သွားလာနေတာမင်းအမေဖင်ချနေလို့နာနေရလား၊ သူတို့ မိုးပေါ်ကကျလာတာမဟုတ်ဘူး၊မင်းတို့လိုတစ်မိသားစုပေါင်းပြီး(၄)(၅)တန်းမအောင်တဲ့အကောင်ကိုပြောရတာလက်သနတယ်၊
ချီးစားမောင်ခင်မင်း မင်းအဖတွေမိုးပေါ်ကကျလာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ မင်အဖေပြောတာတွေတယ်နော်၊စစ်တကောင်းကသူတို့ပိုင်ဆိုတာ၊မင်းတိုကဘာသာမပါချင်
မင်းအမျိုးစစ်တာ ကုလားမျိုးရိုးစစ်တာ မင်းသွေးဖေါက်ကြည့်လိုက်(၁၀၀%)ကုလားသွေး
ကိုယ်ကွယ်တာကုလား၊စာမေ ပါဌိ၊သက္ကတ၊ ကုလားစာ
ပြောတာတောင်ကုလားစကား၊ကိုးကွယ်တာဟိန္ဒူ ၊ဘယ်မှာလဲ ဗုဒ္ဓ ၊ ကိုယ်ထီးနန်းနေရအောင်
ဗမာတွေတိုက်တိုင်း ခြေထောက်ဖက်ပြီးကူပါကယ်ပါပြောနေရတာ ။သမီးဆက်နေရတာ၊။ဘယ်ကုလားတွေဆီလဲသေသေချချာချာကြည့်၊
ငါတို့နယ်မြေလာကြည့်လိုက် မင်းတို့သူတောင်စားခွေးသူခိုး (၁၂)သန်းလောက်ထိုင်နယ်မြေထဲ
ဝက်ဆီသုတ်ပြီးနောက်ပွင့်နဲ့အာချောင်တဲ့ကောင်စား မအေလိုးတွေကို ဗိုက်ပါမကဖင်ပါဖွင့်ပေးလိုက်မယ်။
ရိုဟင်ရဂျာ၊ဘင်္ဂလီကုလားကြီးကတောင် ပါမစ်မလို့ဗီဇာမလို ဝင်လာပြီးဖင်ချပြီးဆုံးမခဲ့ရတာ
အခုမင်းတို့အိမ်မှမဝရေစာကျွေးထားတဲ့ရီုဟင်ဂှာဘင်္ဂလီဗုဒ္ဓကလားကလဲ ညကျရင်မင်းအမေတွေ၊နှမတွေ၊ညီမေတွေကို တက်ချပြီး ရာဟုလာ မိုးတိမ်၊ ရာဟုလာခင်မင်းတွေမွေးလာမှ နမိတ်ကြီးလေးပါးပြန်မြင်ပြီး တောပြန်ထွက်လိမ့်မယ်
အရှက်မရှိ ကူပါကယ်ပါအော်ပြောပေါ့ သနားလို့ပေးကြပါကမ်းကြပါတောင်းယမ်းစားပေါ့ကွာ၊
မင်းတို့ လောင်တီးပြီး မုဒိန်း က စတာလေ ကုလီးကုလိမ် အယုတ်တမာရဲ့
အမျိုးယုတ်တွေ ဂျပိုးကိုလဲ လိပ်ဖြစ်အောင် လိမ်နေသေးတယ်
hey son of the bitch & grandson of the Pig,
we know well how low standard and brainless you are. It’s not even worth to reply your comment but I want to tell you that Buddha was notason of bitch & grandson of Pig like you kalars. Yes, Buddha was born in Lumpini – Nepal from the King and Queen of that place. Not from the bitch like your god which you can not even see. Buddha never asked anyone to put him at houses and worship but we do that in remeberence of his gratefulness/kindness upon all the living things (which including you kalars too). Buddha gave us the right not to follow his religion in blind faith. Does your God even gave you any right?. You do not even have NO Fucking right to question about God or what Mohammad lied to you. You can say whatever you want here but think very very carefully (if you are capable of thinking the right & wrong thing) before you blabbing here on MG.
This comment also replies to all the kalars posting and attacking Rakhine/Myanmar and Buddhism.
မှန်ပါတယ် ဆယာလေး ဘဒါးသား ခင်ဗျ
ခိုးဝင်လာတဲ့ ကလီးတွေကို ဂွေးဖြတ်သင့်ပါတယ်.
မုဒိမ်းမှုဆိုတာ ဥပဒေအရ အရေးယူရမဲ့ ကိစ္စပါ၊ ဒီလိုအမှုတွေ မှုခင်းထဲမှာ ပါတာ မနည်းဘူး၊ မုဒိမ်းကျင့်တိုင်း စိတ်လိုက်မာန်ပါ သွားလုပ်ရင် တစ်မှုပြီးတစ်မှု ပြီးတော့မှာ မဟုတ်ဘူး၊ အမှန်ကို တွေးပါ၊ ဘက် မလိုက်ကြပါနဲ.၊ ဥပမာ- ဘရားသား
ဒီ ခွေးလောက်တောင် အဆင့်မရှိတဲ့ စောက်ကုလားတွေကို လူလိုနေရာပေးထားရင် နောင်တချိန်မှာ ရခိုင်ပြည်မှာ မဟုတ်ဘူး မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုုံး ကုလားမိူး ၊ ကုလားနွယ် ကုလားပြည်ကြီးဖြစ် သတော့မှာကိုမြင်ကြစေချင်တယ်။ အခုတောင် ကုလားမရှိ တဲ့နေရာ မရှိတော့ဘူး။
ဘုရားဟာ ဘုရား ပေမို ့
ကိုရဲခေါင်နဲ့ကိုဖိုက်တာရေကုလားဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲမသိ အစ္စလာမ်ဆိုတဲ့မွတ်ဆလင်ကိုခေါ်တာလား ဟိန်္ဒူကိုခေါ်တာလား။ ကျုပ်ကတော့အားလုံးကိုကုလားလို့ခေါ်တာပဲ ကျုပ်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကရုပ်ဝထ္တုပုံရှိပါတယ် ခင်ဗျားတို့ကိုးကွယ်တာကဘယ်လို့ပုံလဲမသိ သိချင်လှပါဘိ
တော်ကြပါတော့ဗျာ။ဦးသန် ့ပြောဖူးတဲ့ စကားရှိတယ်။လောကမှာ လူနှစ်မျိုးဘဲရှိတယ်။
အဲ့ဒါ လူဆိုးနဲ ့လူကောင်းပါ။အားလုံးသူ အကောင်းဘဲရှိပေါ့မလဲ။အဆိုးနဲ ့အကောင်း၊
အလင်းနဲ ့အမှောင်၊အကျိုးနဲ ့အပြစ် အားလုံးဒွန်တွဲနေတာပါဘဲ။
ဟောင်တဲ့ခွေးကြောင့် အိပ်ရေးပျက်လှသည် ( ပျက်ဆို ကျုပ်အိမ်က ကျူထရံမိုးဖက်ကာ အိမ်ဟာဂိုး )
ကိုအောင်ပု အား ထောက်ပံ့ အားပေးပါအိ
ဟုတ်တယ် olo ပဲ
yel kaung,ဖိုက်တာဆိုတဲ့ကောင်တွေက မွတ်စလင်ကုလားတွေ ထင်တယ်၊
မြန်မာနဲ့ရခိုင်ကို ကဗျာနဲ့ ရန်တိုက်လိုတိုက်၊ ဘင်္ဂါလီက ကယ်သတဲ့၊
ပြသနာက သူတို့လုပ်တဲ့မုဒိမ်းမှူက စတာလဲ သိရက်နဲ့၊
တယောက်က ဘုရားနဲ့ကုလား ကတဂိုဏ်းထဲတဲ့၊ (ဂိုဏ်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ် လည်ရဲ့လား)
နံ့သာဆီ နဲ့ အီးဘဲ၊
ဟေဟေ့ အဲဒီမှာ စပေါ်တာဘဲ
ပြီးရင် ဗမာလိုလို ရခိုင်လိုလိုနဲ့ သောက်ရှက်မရှိ ရန်တိုက်ပေးဦးမယ်။
ပျော့ပျော့လေးနဲ့ ကြောင်ချီး ကလိမ်ခြုံ အယုတ်တမာကောင်တွေကို
တုနိူင်းစရာ ပြောစရာ ရှာမတွေ့တော့လောက်အောင် စိတ်ပျက်နေပြီခမျ ။
မြန်မြန်သာ ငါတို့မြေက လစ်ကြစမ်းပါ…။ အလိုမရှိဘူး…။ သူများမြေလာကပ်နေတဲ့ ဘဂါင်္လီစုတ်တွေ…။ သားရေပေါ်အိပ်၊ သားရေနားစားတွေ….။ အဆင့်မရှိတဲ့ တစ်ဆင့်ချိုင့်တွေ….။ ဘဂါင်္လီ အလိုမရှိ…။
ဘုရား ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သာကီဝင် မင်းမျိုး နဲ့ ပုဏား ဇာတ်မြင့် မျိုးမှာသာ ဖြစ်တာပါ
ကုလားစုတ် ကုလားပြတ် ဘင်္ဂလီ မျိုးမှာ ဘုရာပွင့် ဖို့ နေနေသာသာ ဒေဝဒတ် တောင် မဖြစ်ဘူးဆိုတာ ကို
ကုလားစုတ်ကုလားပြတ် ခွေးနဲ့ ဝက်နဲ့ လုပ် လို့ ဖြစ်လာတဲ့ နောက်ပြီး ကိုယ့်အမေ ကိုယ်ပြန်လုပ်လို့ ဖြစ်လာတဲ့ ကောင်တွေနားလည်ကြပါစေ။
စာသား များက အရမ်းမိ
ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာနဲ့သူတို ့နာမည်ခေါ်တယ်မှတ်ပြီး အလျှိုအလျှိုထွက်လာပြီး ဖိုက်ကြရော
ကုလားလို ့ခေါ်တာမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ပြည်တွင်းနေအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များလို ့လုပ်ပြီးမှ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသူတွေအတွက် ဘာတွေ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်နေကြတာတုန်း။ စကားထဲက ဇာတိပြဆိုတာ ဒါမျိုးထင်ပါ့။
အလိုလိုနေရင်း အဲဒါငါတို ့ပါလို့လာဝန်ခံသလိုဖြစ်နေတယ်
အဆဲမပါပဲလူလို သူလိုပြောကြလို ့မရဘူးလား
မင်းမေလင်တွေ ထောက်ပံ့ကြေးနဲ့တည်ထောင်ထားတဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်များမှတ်နေလား
ဆိုက်ကား နားတုန်း ငါးဆယ်ဖိုး တစ်ရာဖိုး ဝင်သောက်လို ့ရတဲ့ ကျူးကျော်ရပ်ကွက်က ဘီအီးဆိုင်များမှတ်နေလား
ဘီအီးသောက်ရတာ လစ်မစ်မပြည့်လို ့ညစ်နေရတဲ့အထဲ လီးလိုမှိုလို လာလုပ်နေကြတယ်..
နေရင်းထိုင်ရင်း အဖျက်ခံရရင် လေးဆယ်ပေးရဦးမယ်